SPC na-emegharị mbadamba ya ma wepụta usoro ọdịyo maka oge okpomọkụ | Akụkọ akụrụngwa
Hot okpomọkụ ụtụtụ nke SPC kpebiri ikpokọta ndị mgbasa ozi n'otu n'ime ebe ndị nnọchi anya Madrid, na Palacio de la Prensa n'ihu akụkọ ifo Callao bụ ezigbo ebe iji gosipụta ụdị ọhụụ ọhụụ nke SPC bu n'obi ịtụgharị ụdị ọha mmadụ niile, na nke mbụ ya ụlọ ọrụ ahụ gbalịrị ịmalite mkpọsa pụrụ iche maka ngwaahịa ya.
Ma ọ bụ ya SPC na-ewepụta mkpokọta Groovy ọhụrụ ya, nhọrọ nke ndị na - ekwu okwu ikuku na njikọ Bluetooth ga - eso gị gaa ebe ọ bụla ị gara n’oge anwụ. Na mgbakwunye, ha ji ohere ahụ nye ihu igwe n’elu mbadamba nkume ha, ị ga-atụ uche akụkọ a niile?
Ndị a bụ ndị ọkà okwu ọhụrụ si na Groovy Collection, mejupụtara ya Otu Ọkà Okwu, Otu Ọkà Okwu Boho Edition, Nnukwu Onye Ọkà Okwu, Ọkà Okwu Bang, Nnukwu Ọgba Okwu, na Sphere.
1 Mpịakọta nke Groovy Collection
1.1 Otu Ọkà Okwu na Nnukwu Otu Ọkà Okwu
1.2 Bang okwu na nnukwu okwu
1.4 Otu Ọkà Okwu Boho Edition
2 Mbadamba nkume ọhụrụ ahụ na Eluigwe 10.1 melite
Mpịakọta nke Groovy Collection
Otu Ọkà Okwu na Nnukwu Otu Ọkà Okwu
Anyị na-amalite na One Ọkà okwuỌkà okwu nke dị ka ọkụ dịka e mere ya nke ọma, ọ dị naanị milimita 92 x 80 x 30 ma buru naanị gram 160 ka ị were gaa ebe ọ bụla ị na-aga. Agba agba agba na Night Blue na Black Black. Mana ihe masịrị gị bụ ike, ị ga-enwe 4W, njikọ Bluetooth (nke nwere ihe ruru mita 10) yana ruo elekere atọ nke nnwere onwe.
Anyi nwekwara nwanne ya nwoke nke okenye Nnukwu Otu Ọkà Okwu, 163 x 150 x 53 nke okwu okwu, ma ị ga-enwe aka dị mma iji bufee ya. Na otu Bluetooth erite na oge a anyị ga-enwe ruo 10W. Ha abuo nwere uzo di nkpa mara nma ma dikwa nma n’otu oge. O doro anya na azụ anyị ga-enwe njikọ AUX (dị na ụdị niile anyị na-ekwu maka taa) maka oge mgbe anyị enweghị Bluetooth, ma maka € 19,90 na € 29,90 karị.
Bang okwu na nnukwu okwu
Bang Ọkà Okwu (€ 29,90) na-adọta uche maka imepụta ya. Site na ngwụcha nke jikọtara akwa na isi roba, ọ dị na nsụgharị abụọ, Night Night na Black Black. Ọ jikọrọ 189 x 85 x 49 millimeters, gụnyere ọkà okwu 8W na nnwere onwe nke aka 7 awa nke enweghị mgbagha iji ekele maka obere oriri Bluetooth. N'aka nke ọzọ, ihe nlereanya Nnukwu okwu (€ 59,90) nwere ike ibugharị site n’otu ebe gaa na ebe ọzọ site n ’iru ya na nha ya. Oge a anyị ga-anụ ụtọ ihe ruru elekere iri nke nnwere onwe.
okirikiri bụ ihe ọzọ nke SPC si wireless amụma, nke integrates a minimalist na mara imewe ọnụ na a 6W ọkà okwu. Anyị ga-anụ ụtọ ihe ruru awa asatọ nke nnwere onwe na nke bụ eziokwu bụ na ọ bụ ya tụrụ anyị n'anya nke ukwuu na nkwupụta ahụ, ebe ọ ga-adị mma n'akụkụ ọ bụla nke ụlọ site na € 8.
Otu Ọkà Okwu Boho Edition
SPC amalitela Boho mbipụta, mbipụta a na-enwe n'oge ọkọchị nke na-agba ndị na-ekwu okwu agba Otu Ọkà Okwu nwere agba atọ dị egwu: Ube oyibo Green, Ọwụwa Yellow na Lotus Pink. Na nke mbụ, SPC malitere iji kwalite ngwaahịa pụrụ iche nke ngwaahịa ya, nke bụ eziokwu bụ na agba chapụrụ anyị anya. Anyị ga-ahụ 4W nke ike yana ruo elekere 3 nke egwu na-enweghị mgbagha dịka ọ dị na ikpe gara aga site na .19,90 XNUMX.
Mbadamba nkume ọhụrụ ahụ na Eluigwe 10.1 melite
Eluigwe 10.1 Mbadamba Emelitere ha site na ikike site na 8GB ruo 64GB nke ngụkọta ebe nchekwa, tinyere 10,1-anụ ọhịa IPS HD ihuenyo, mkpebi nke 1280 × 800 pikselụ na akụkụ akụkụ nke 16: 10. Anyị ga-enwe 2GB nke Ram na Mali 400MP2 GPU nke ga-eme ọmarịcha soro ya gam akporo 7.0 na nhazi ya 1,3 GHz Quad Core.
N'aka nke ọzọ, ha na-agbakwunye ngwaọrụ ọhụrụ:
Blink 10.1: Otu atụmatụ dị ka Eluigwe mana ya na 1GB RAM.
Flow 7: Injin asaa nke ihuenyo, nchekwa dị n'ime nke 8GB na 1GB nke RAM iji mee ka ọ rụọ ọrụ dị ka o kwere mee, yabụ ndị na-ege ụmụaka ntị ga-abụ ebumnuche ya.
Nwunye 10.1: Ezenwaanyị nke ụlọ, mkpebi HD zuru oke, 2GB nke RAM, ihe nhazi Cortes A53 na ebe nchekwa dị n'ime nke 32GB nchekwa.
Anyị nwere ike ijide nke ọhụrụ Eluigwe 10.1 site na € 109,90, mgbe nke Ejiri Ọ dị ntakịrị oke ọnụ n'ihi ike ya, ọ ruru € 179. Modelsdị Blink efu € 89,90 na Nweta 7, dị ọnụ ala, si naanị € 59,90.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » SPC na-emegharị mbadamba nkume ya ma malite usoro ọdịyo maka oge ọkọchị
AMD weputara Radeon Vega Frontier Edition na oru ruru 13,1 TFLOPS